Xogtii u danbaysa waxay xaqiijisay horumar ay samaysay xaalada aadaminimo ee Soomaaliya. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Xogtii u danbaysa waxay xaqiijisay horumar ay samaysay xaalada aadaminimo ee Soomaaliya.
Xogtii u danbaysa waxay xaqiijisay horumar ay samaysay xaalada aadaminimo ee Soomaaliya.
February 1, 2013 - By: Hanad Askar
Isku dubaridaha aadaminimo wuxuu ka digayaa in la is mahadiyo iyadoo ay masiibada aadaminimo sii socoto.
Nayroobi (01 Febraayo 2013) – ku simaha isku dubaridaha xaalada aadanimo ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya- Stefano Porreti wuxuu soo dhaweeyey maanta ku dhawaaqidda in tirada dadka ku jira masiibada aadaminimo ee Soomaaliya ay kalbar noqdeen lixdii bilood ee u danbaysay iyadoo noqotay 1.05 malyan, laakiin waxuu ka digay in horumarkan uu si sahlan dib ugu noqan karo gargaar joogto ah la’aantiis.
“Ku dhawaaqidda maanta waxay tusaysaa habka casriga ah ee kaalmada loo gaarsiiyey dalka, iyadoo ay weheliyaan roobab dhexdhexaad ah oo dhiirigelin leh, waxayna arintaas is bedel qoto dheer ku yeelatay nolosha dadka” – ayuu yiri. “ si kastaba ha ahaatee xaalada binu aadanimo ee Soomaaliya wali waa daran tahay iyado in ka badan hal malyan oo dad ah ay ku jiraan masiibo, aysana awoodin inay helaan baahiyaha asaasiga ah caawimo la’aanteed” 1.7 malyan oo dad dheeraad ah oo ka soo baxay masiibadii sanadkii hore ayaa wali ku jira walaac xaalada sugnaanta cuntada ah. “ Xaaladu wali waa jilicsan tahay. Malaayiin soomaali ah ayaa si sahlan dib ugu dhici kara masiibo taageero joogta ah la’aanteed si ay u helaan baahiyaha asaasiga ah iyo in la dhiso noloshooda,” Porretti ayaa yir.
“Heerarka nafaqo daradu waa soo hagaagtay laakiin wali waxay ka mid tahay mida ugu saraysa aduunka, iyadoo 215,000 oo caruur ka yar da’da shan sano ay la il daran yihiin nafaqo darro. Ayuu yiri’ waxa in taas dheer saadaal hordhac oo laga sameeyey roobabka (Abriil ilaa Juun) ay sheegayso in la heli doono roobab ka yar intii la heli jiray caadiyan”.
“ Kani ma ahan waqti aan la welwelin, 2010kii waxaynu aragnay horumar kan oo kale ah oo xaalada aadaminimo samaysay, sanadkaa kadib kumanaan dad ah ayaa u dhintay macaluul soo korodhay maxaa yeelay dadkii saboolka ahaa uma diyaarsanayn inay iska caabiyaan abaarta iyo sare u kaca baahsan oo ku yimid qiimaha cuntada. Inagoo helayna taageerada deeqsimo ee deeq bixiyayaasha, waxaynu badbaadinay nafo aan la soo koobi Karin, hadii aynu heli lahayn kaalmada dhaqaale goor hore intaas in ka badan oo nafo ah ayaan badbaadin kari lahayn” ayuu yiri Porretti. Hada waxaynu haysanaa fursadii ugu wanaagsanayd labaatan sano oo aynu ku kala jabin karno giraantaan masiibada aadaminimo ee soo noqnoqotay oo ay keentay abaarta iyo colaaddu”
Qorshahan sadexda sano ee habkaan casriga ah ee kaalmada aadaminimo ee loogu talo galay soomaaliya waxuu daboolayaa baahida deg dega ah iyo masiibada dabiiciga ah ee aadaminimo oo jiitantay ee soomaaliya iyadoo dhisaysa karti ku salaysan bulshada si ay ugu ogolaato dadka inay yareeyaan masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa soo noqnoqday, qorshahaas oo loo sameeyey soomaaliya Diseember markii ugu horaysay, codsiga dhaqaale ee wadajirka ah ee soomaaliya waxuu u baahan yahay 1.3 malyan 2013ka, kasoo loogu talo galay baahida deg dega ah iyo in sare loo qaado kartida, tani waxay lagama maarmaan u tahay in laga fogaado in dib loogu noqdo masiibadii dhacday 2011kii oo kale. “waxaa loo baahan yahay in la sii wado caawimada dadka waayey wax kasta oo ay lahaayeen si ay dib ugu laabtaan nolol wax soo saar leh sidaas daraadeed waxay awoodi doonaan in ay la tacaalaan masiibooyinka iman kara mustaqbalka iyo iyadoo yaraata ku tiirsanaantooda caawimada. Ayuu yiri Porretti.
Soomaaliya waxay ka mid tahay goobaha ugu caqabada iyo khatarta badan aduunka oo laga wado kaalmada aadaminimo. “ colaada iyo hakadyadu waxay caqabad ku yihiin galaangalka loo leeyahay dadka baahan taasoo adkaysay dadaalka caawimada. Laakiin galaangalku wuxuu usoo hagaagayaa si tartiib tartiib ah. Waan sii wadi doona in aan raacno hababkaas casriga ah si aan u gaarno dadka baahan sidii aan samaynay xiligii lagu guda jiray macaluusha, isla markaasna waxaan is bedel ku samayn doonaa habka guud ee ah in qarash lagu bixiyo jawaabta masiibo kasta oo cusub iyadoo maal gelin lagu samaynayo in la yareeyo” ayuu yiri porretti.
Xogta ku saabsan sugnaanta xaalada cuntada waxay ku taal warbixin ay maanta soo saarta haya’ad falan qaysa xaalada sugnaanta cuntada iyo nafaqada oo ay maamusho haya’ada u qaabilsan qaramada midoobay beeraha iyo cuntada, iyo hay’ada digniinta hore ka bixisa macaluusha, warbixinta waxaad ka heli kartaa http://www.fsnau.org/.
Faafin Horseed Media 2013